यी ४ राशी हुनेलाइ छोड्दैन लक्ष्मीले साथ! तपाईंको कुन राशी? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यी ४ राशी हुनेलाइ छोड्दैन लक्ष्मीले साथ! तपाईंको कुन राशी?
हामीले केही कुरा धर्मशात्रका कुरामा विश्वास गर्ने हो भने केही राशिहरु छन । जुन वास्तवमै भाग्यमानी राशि हुन । हुन त यी ४ राशी बाहेक अन्य ८ राशिमा पनी उत्तिकै कृपादृष्टि रहन्छ तर आज हामी यी ४ राशिको चर्चा गर्दै छौ ।
वृष राशीको स्वामी शुक्र हो जसका कारण वृष राशिका मानिसहरु शुक्र ग्रह बाट प्रभावित हुन्छन।
कर्कट राशिका मान्छेहरु लक्जरी वस्तुहरु प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छन् । यी मानिसहरु पुरै जिन्दगी बिलासितामा बिताउने शोख राखछन् जुन उनीहरुको भाग्यमा लेखियको हुन्छ र पुरा गर्न समेत सक्षम हुनेछन् । उनीहरु कडा परिश्रम गर्न समेत पछि पर्दैनन् त्यसैले उनीहरु प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन । यस राशिका मान्छेहरूको भाग्य सधैं उनीहरुसँग हुन्छ, जसको कारण उनीहरु धनी बन्न सक्छन ।
यस राशिका मान्छेहरु आफ्नो नेतृत्व विकासका सबन्धमा क्षमतवान हुन्छन । यिनीहरुमा कुनैपनि संघ-संगठन वा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । यी राशिका मानिसहरुमा अन्य १०० जनाले गर्ने कामको एक्लै सिद्ध गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । यिनीहरु कहिले पनि धनको पछाडी दौड्दैनन् तर उनीहरुको लक्जरी अवश्यकता पुरा गर्नका लागि मेहेनतका साथै कडा परिश्रम गर्ने गर्छन ।
यो राशिका मानिसहरु धेरै विशेष हुने गर्दछन् । यिनीहरु भौतक चिजका बढी सौखिन हुने गर्छन । यदि प्रकृतिमा उनिहरुले मनपराएका कुनै चिज देखेभने त्यसको प्राप्तिको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसको लागि उनीहरु धेरै मेहेनत गर्ने गर्छन । धन आर्जनका लागि उनीहरु जस्तोसुकै काममा पसिना बगाई क’डा परिश्रम गर्न तयार हुन्छन ।